यौन-आवेग दबाउने कि व्यवस्थापन गर्ने ?::Digital News Paper
१युवाहरुका लागि निःशुल्क कुकिङ तालिम !!!
२महिलालाई मात्र देखिने ६ प्राण घातक राेग यस्ता छन्
३चितवनमा शक्तिशाली बम विस्फोट, वडा कार्यालय ध्वस्त
४सशस्त्र प्रहरीमा खुल्यो भर्नाः यी जिल्लाबाट भर्न पाइन्छ आवेदन फारम
५सरकारले विप्लवमाथि प्रतिवन्ध लगाएपछि काँग्रेसको आयो यस्तो प्रतिक्रिया
६विवाहको दिन छोरीले दुलहासँग विवाह गर्न नमानेपछि आमा नै बनिन् दुलही
७श्रीमानको कुटाइबाट श्रीमती अस्पताको बेडमा, कारण घरायसी विवाद
८हत्यामा संलग्न एक पक्राउ
९भिक्षु अस्वघोषको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर
१०सडक छेउमै शवगृह, दुर्गन्ध फैलियो
११धुलोले आक्रान्त स्थानीयले बन्द गराए कलंकी-नागढुंगा सडक
१२सप्तरीमा सवारी दुर्घटना, २ जनाको मृत्यु, प्रदर्शनले राजमार्ग अवरुद्ध
१३यौन-आवेग दबाउने कि व्यवस्थापन गर्ने ?
१४‘शुभ लभ’ गीतमा टुक्रियो हरिहरको सपना (हेर्नुस भिडियो)
१५मैले सलमान खानको सबैकुरा सहेकी छुः ऐश्वर्य राय
यौन-आवेग दबाउने कि व्यवस्थापन गर्ने ?
प्रकाशित मिति :बुधबार, फाल्गुन २९, २०७५ Wednesday, March 13th, 2019
सरकारले नेपालमा पोर्न साइटमाथि प्रतिवन्ध लगाएको छ, भलै त्यो पूर्णतय सफल नभएपनि । सरकारले पोर्न साइट अर्थात इन्टरनेटमार्फत उपलब्ध हुने अश्लिल सामाग्रीलाई त्यहीबेला नियन्त्रण गर्न खोजेको हो, जतिबेला निर्मला पन्त हत्याकाण्ड उत्कर्षमा थियो । त्यसपछि पनि बलात्कार, हत्याको शृंखला चलिरहेको थियो । ठिक यही मेसोमो सरकारले सरकारले पोर्न साइटमाथि प्रतिबन्धको प्रयास गर्‍यो, बलात्कार वा यौन हिंसाले बढाव नपाओस् भनेर ।
यौनजन्य सामाग्री सहज भएपछि त्यसबाट पनि मान्छेले आफ्नो यौन इच्छा मेट्न पाउँछन् । उनले यौनलाई दबाउनु पर्दैन । हस्तमैथुन जस्ता केही विधी छन्, जसले यौन आवेग शान्त गर्न सकिन्छ ।यौन दवाउने कुरा होइन । यो प्राकृतिक आवश्यक्ता हो । यौन इच्छालाई जति दबाइन्छ, उत्तिनै यसले मनोविकार पैदा गर्छ । त्यही मनोविकारले हो, अश्लिल हर्कत गर्न उक्साउने ।तर, हाम्रो समाजमा यौनबारे खुला बहस हुँदैन । यौनलाई ‘छाडा’ भन्ने गरिन्छ । भित्रभित्रै यौन-आवेग पैदा भएपनि बाहिर भने दबाइन्छ । यौन सम्बन्धी उठ्ने जिज्ञास मेट्न सकिदैन ।
चिन्तक एवं आध्यत्मिक गुरु रजनिशले भनेका छन्, ‘यदि यौनलाई दमन गरियो भने मान्छे कामुकभन्दा कामुक हुन्छन् ।’ उनले एक प्रसंग सुनाएका छन् । एकपटक रजनीश कुनै गाउँमा पुगेका रहेछन् । त्यहाँ ठूला विचारक र सन्त-साधु मिलेर अश्लिल पोस्टरमाथि विरोध गरिरहेका थिए । उनीहरुको धारणा के थियो भने, अश्लिल पोस्टर जथाभावी टाँसेकाले गर्दा मान्छेमा कामवासना फैलिएको छ । रजनीशले भनेका छन्, ‘जबकी अवस्था ठिक फरक छ । त्यही मान्छे पोस्टर हेर्न पुग्छन्, जसमा यौनकुष्ठा छ । जो यौनमा तृप्त छ उसलाई त यसले कुनै असर गर्दैन ।’
यौनलाई हामीले सधै छाडा भन्यौं । बर्जित गर्‍यौं । निषेध गर्‍यौं । यसलाई लाजको विषय बनायौं । रजनीश भन्छन्, ‘हामीले यौनलाई गालीभन्दा माथिल्लो सम्मान कहिल्यै दिएनौ । हामी यौनको कुरा गर्दा समेत भयभित हुन्छौं । हामीले यौनलाई यसरी लुकाएर, दबाएर राख्यौ कि मानौ जीवनमा त्यसको कुनै स्थान छैन ।’उनले यौननै जीवनको सर्वाधिक महत्वको कुरा भनेका छन् । सत्य त के भने यौनभन्दा मध्वपूर्ण मान्छेको जीवनका अरु केही छैन । तर, यसलाई हामीले दबायौं, लुकायौं । लुकाउने र दबाउने कामले गर्दा हामी यौनबाट मुक्त भएनौं । बरु यौन आवेगले ग्रस्त हुँदै गयौं । किनभने दमनले ठिक उल्टो परिणाम दिन्छ ।
त्यही कारण यौनबारे जिज्ञासा मेट्न सकिने कतिपय वेब सामाग्रीमाथि अहिले प्रतिबन्ध छ । यसरी यौन इच्छा एवं यौन व्यवहारलाई उपेक्षा गर्नु कति सही हो ? यस सम्बन्धमा वहस हुनेनै छ । यद्यपी यौनजन्य सामाग्री जथाभावी रुपमा उपलब्ध गराइनुपर्छ, यौन व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने होइन । बरु, यसलाई समूचित ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।जब यौनलाई विकृत ढंगले हेरिन्छ र व्यवहार गरिन्छ, तब त्यो रोग बन्छ । तर, यौनलाई खुला ढंगले बुझ्ने र यसलाई एक प्राकृतिक आवश्यक्ताको रुपमा स्विकार्ने हो भने यौन विकार पैदा हुन पाउँदैन । यसलाई सहज रुपमा लिइनेछ ।
यौनलाई सहज रुपमा लिनुपर्छ भन्दैमा अश्लिल सामाग्री छ्यापछ्याप्ती वा अनियन्त्रित हुनुपर्छ भन्ने होइन । यौनको पनि आफ्नै सीमा र मर्यादा छन् । जब यसले आफ्नो मर्यादा पार गर्छ, तब यौन छाडा हुनपुग्छ । अश्लिल हुनपुग्छ । यौनबारे जिज्ञासा मेट्न वा यौन व्यवहारलाई थप रोमाञ्चक बनाउनका लागि हामीले यौनजन्य सामाग्री हेर्न सक्छौं । यौनजन्य सामाग्रीबाट केही कुराहरु सिक्न र बुझ्न पनि सक्छौं । तर, त्यस्ता सामाग्रीमा लिप्त हुने र समय बर्बाद गर्ने काम भने पक्कै सकारात्मक होइन ।यौनमा आवश्यक्ताभन्दा बढी तन-मन लगाउनु भनेको यौनको कुलत हुनु हो । कुलतले कहिले पनि सकारात्मक नतिजा दिदैन । त्यसैले यौनप्रति लिप्त भएर त्यसमै घोत्लिने, यौन सामाग्री खोज्ने, मनमा यौनकै विषयमा सोच्ने जस्ता प्रवृत्ति ठिक हुँदैन ।
के पोर्न फिल्म हेर्नुहुन्छ ? ख्याल गर्नुस लाग्न सक्छन यस्ता रोग !
निरन्तरको यौन सम्पर्कले बचाउँछ क्यान्सर लगायत यस्ता रोगबाट !
यस्तो छ भोलि आषाढ ६ गते बिहिवारको राशिफल !
यस्तो छ आज आषाढ ५ गते बिहिवार को राशिफल !
के तपाई प्रेम जालमा परेर ब्रेकअपमा पर्नु भएको छ ? यी हुन ब्रेकअप भुल्ने ४ उचित उपाय
१ होण्डाई भेन्यु गाडी (लन्च)सार्बजनिक (भिडियो सहित)
२ ग्रहण छिचोलेर चम्किएका चन्द्र
३ युवाहरुका लागि निःशुल्क कुकिङ तालिम !!!
४ श्रीमान श्रीमतीले सेक्स गरेको भिडियो सार्बजनिक , दम्पत्तीले गरे आत्महत्या !
५ गगनकै बाटोमा हिड्यो ओली सरकार, उपेन्द्रको रह्यो यस्तो भूमिका ?
६ यी हुन् सेक्स पावर बढाउने खाने कुरा !
७ के पोर्न फिल्म हेर्नुहुन्छ ? ख्याल गर्नुस लाग्न सक्छन यस्ता रोग !
८ प्याजको प्रयोगले दिन्छ लगातार ३ घण्टा यौन आनन्द ! यस्तो छ तरिका ?
२ असिनापानीले महोत्तरीमा तरकारी बाली नष्ट
३ सुनको भाउ घट्यो,
४ युवा ज्योतिष अर्जुन छेत्रीले भनेको सहि भयो “यो फाल्गुन महिनामा नेपालमा हेलिकप्टर दुर्घटना हुन्छ ” (हेर्नुस भिडियो सहित)
५ हेलिकोप्टर दुर्घटनाका मृतकको उद्धारमा कठिनाइ
६ भारतीय गोलभेडाले नेपाली गोलभेडा बिकेन
७ आज (बिहिबार) कति छ सुनको मुल्य ?
८ सेयर लगानीकर्ताले १ वर्षमा गुमाए २ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ